ပြား၊ ဦး (သက်ကြီးမောင်) - ဝီကီပီးဒီးယား
ခရက်ရှာ ပြိုင်ပွဲသက်ကြီးတန်း မှာ ဒုတိယဆုကိုရရှိခဲ့တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သက်ကြီးတန်း မောင်ပြိုင်ပွဲတိုင်းမှာ ပထမဆု ချည်းရရှိခဲ့သူ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။
ဦးပြားကို အဘ ဦးတင် ၊ အမိ ဒေါ်လှဆိုင် တို့မှ ၁၉၄၅ ခုနှစ်။ ဇန်နဝါရီလ (၁၁) ရက်နေ့တွင် မန္တလေးတိုင်း မိထ္ထီလာ ခရိုင်၊ ဝမ်းတွင်းမြို့၊ သဲစုကျေးရွာတွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး အသက် (၁၅) နှစ်အရွယ်မှ စတင်ကာ ကာယဗလ အားကစား ကို လိုက်စားခဲ့ပါတယ်။ အသက်(၁၆) နှစ် အရွယ်မှာ မန္တလေး မြို့ အထက်တန်း ကျောင်းမှ (၁၀) တန်း အောင်မြင်ခဲ့ပြီး တက္ကသိုလ် ဆက်တက်ခဲ့ရာ မန္တလေး တက္ကသိုလ် မောင်ဘွဲ့ ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ တစ်ခု ပြောချင်တာက ဦးပြား ဟာ မောင်ဘွဲ့ရတာနဲ့ တက္ကသိုလ် က ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာ ဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ သူ လိုချင်တဲ့ တက္ကသိုလ်မောင်ဘွဲ့ ရရှိပြီးပြီမို့လို့ပါပဲ။ အဲဒီဘွဲ့ ရချင်လို့ပဲ တက္ကသိုလ် တက်ခဲ့တယ် လို့လည်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ တော်တော် လေးကာယဗလ ကို ဝါသနာ ပါခဲ့တယ် ပေါ့ဗျာ။ နောက်ပိုင်းတွင် ဘဝဝမ်းရေးအတွက် ဌာနဆိုင်ရာ တစ်ခုတွင် ဝန်ထမ်းဖြစ်လာပြီး ရာထူးဆက်လက် တက်ဖို့အတွက် ဘွဲ့ရမှ ဖြစ်သောကြောင့် ၁၉၈၂ ခုနှစ် အသက် (၃၇) နှစ် အရွယ်ကျမှ တက္ကသိုလ် စာပေးစာယူ (အဝေးသင်) ကို တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ဘီအေ(မြန်မာ) ဘွဲ့ ကိုရရှိခဲ့သည်။
၁၉၆၆ ခုနှစ်တွင် ဆရာ ဦး ဘသိန်း ၏ ဓားတန်း အလေးမ အသင်း တို့ ဦးပြား ရောက်ရှိလာပြီး ကျွန်တော် ကာယဗလ ကစားချင်ကြောင်း ဦး ဘသိန်း ကို ပြောရာ ဆရာဦး ဘသိန်း ကကာယဗလ တော. ငါ လက်မခံဘူး။ မင်းအလေးမ မယ် ဆိုရင်တော့ လာခဲ့ ငါ့ရဲ့ ဓားတန်း အလေးမ အသင်းက လက်ခံတယ်လို. ပြောလွတ်လိုက်ရာ ဦးပြား က ကျွန်တော် ကာယဗလ ပဲ ကစား ချင်တယ်။ အလေးမ မချင်ဘူးဆိုကာ ပြန်သွားကြောင်း။ နောက်မကြာခင် တစ်ခေါက် ထပ်ရောက်လာပြီး ပြောပြန်ရော ဦးဘသိန်းလည်း အရင်တိုင်းပြောလွှတ် လိုက်ရာ သူက လည်း လက်မခံ ဘဲ ပြန်သွားကြောင်း။ နောက်ဆုံး တတိယ အကြိမ် ရောက်လာတော့မှ သူက ဆရာ ကျွန်တော် အလေးပဲ မပါတော့မယ် ဆိုပြီးပြောတယ်။ ဦးဘသိန်းလည်း အဲဒီအခါကျမှ အသင်းသား အဖြစ် လက်ခံပြီး အလေးမ နည်းစနစ် တွေကို သင်ကြားပေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အဆိုပါ အသင်းတွင် လေ့ကျင့်ရင်း ၁၉၆၇ ခုနှစ် တွင် အလေးမ ဖလိုင်းဝိတ် တန်းတွင် မန္တလေးတိုင်း လက်ရွေးစင်အဖြစ် စတင်ရွေးချယ်ခံရပြီး ယင်းနှစ် ရန်ကုန်မြို့တွင် ကျင်းပသောပြည်နယ်နှင့် တိုင်း အလေးမပြိုင်ပွဲတွင် ဖလိုင်းဝိတ်တန်းတွင် ဒုတိယ ဆုရရှိခဲ့ကာ (ယင်းနှစ်မှာပင် မန္တလေးတိုင်းအသင်းက အလေးမတံခွန်စိုက်ဒိုင်းဆု ကို ရရှိခဲ့သည်။) ဦးပြား၏ အလေးမနှင့် ကာယဗလ မောင် သက်တမ်းအတွင်း အောင်မြင်မှုများမှာ
၁၉၆၅ ခုနှစ် —–မန္တလေး တက္ကသိုလ်မောင်
၁၉၆၈ခုနှစ်—-(၅)ကြိမ်မြောက် ကျွန်းဆွယ် အားကစားပြိုင်ပွဲ (ဖလိုင်းဝိတ် တန်း) – ပဏမရွှေး ခယ်ခံရခြင်း
၁၉၇၄ခုနှစ်—–ပြည်နယ်တိုင်းအလေးမ (ဘင်တန်ဝိတ်တန်း) ပထမ
၁၉၇၇ ခုနှစ်—–ပြည်နယ်တိုင်းအလေးမ (ဘင်တန်ဝိတ်တန်း) ပထမ
၁၉၇၇ ခုနှစ်—–အမျိုးသားတံခွန်စိုက်အလေးမ( ဘင်တန်ဝိတ် တန်း) ပထမ
၁၉၈၁ခုနှစ်—- -ပြည်နယ်တိုင်းအလေးမ (ဘင်တန်ဝိတ်တန်း) ပထမ
၁၉၈၁ခုနှစ်——အမျိုးသားတံခွန်စိုက်အလေးမ( ဘင်တန်ဝိတ် တန်း) ပထမ
၁၉၉၀ခုနှစ်—-ပြည်နယ်တိုင်းအလေးမ (ဘင်တန်ဝိတ်တန်း) ပထမ
၁၉၉၂ခုနှစ်—- ပထမအကြိမ်အမျိုးသား အားကစားပြိုင်ပွဲတွင် တတိယ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းအဆင့် ကာယဗလမောင်ကီလို (၆၀)တန်း
၁၉၉၅ခုနှစ်—–ရန်ကုန်မြို.အမျိုးသား ဇာတ်ရုံတွင်ကျင်းပသော ပထမ အိုလံပစ်နေ.အထိမ်းအမှတ် သက်ကြီးတန်း ကာယဗလ မောင် အသက်(၅၀)နှင့် (၅၅)ကြား
၁၉၉၆ ခုနှစ်—ရန်ကုန်မြို့အမျိုးသား ဇာတ်ရုံတွင်ကျင်းပသော ဒုတိယ အိုလံပစ်နေ့အထိမ်းအမှတ်နှင့် ပက်စီကိုလာ ကာယဗလ မောင် သက်ကြီးတန်း(၅၀)နှင့် (၅၅)ကြား
စသည်တို့ကိုရရှိခဲ့ပြီး ယနေ့အချိန်ထိ သက်ကြီးတန်း မောင်ပြိုင်ပွဲတိုင်းမှာ ဆုတံဆိပ်များ ဆွတ်ခူးခဲ့တာ ဒီနှစ်(၂၀၁၀) ခရက်ရှာ ပြိုင်ပွဲအထိတိုင်ဖြစ်ပြီး ၁၉၆၆ ခုနှစ်မှ ယနေ.အချိန်ထိ အလေးမနှင့် ကာယဗလ ပြိုင်ပွဲများအတွက် ဂုဏ်ဆောင်ခဲ့ သလို မန္တလေးတိုင်း အလေးမအသင်း၏ နည်းပြ အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သလို ၁၉၈၂ ခုနှစ်က မြန်မာ နိုင်ငံ အားကာဦးစီး ဌာန မှ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော ရုရှားနည်းပြ ဆရာ (အိုပီဆာရက်စကီး) ၏နည်းပြ သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁) သို့လည်း တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ မန္တလေး တိုင်း အလေးမအသင်းနှင့် ကာယဗလ ဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် အဖြစ်လည်းကောင်း အတွင်းရေးမှူးအဖြစ်လည်းကောင်း စာရင်းစစ်အဖြစ်လည်းကောင်း ကျရာနေရာမှ တာဝန်ယူခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ဦးပြားသည် အသက်(၂၀)အရွယ်တွင် မောင်တက္ကသိုလ်ရရှိခဲ့ပြီး နှစ်ပေါင်း (၂၅)နှစ်တာ ကာလအတွင်း ပြည်နယ်နှင့် တိုင်း အလေးချန်ပီယံ (၅)ကြိမ် ၊အမျိုးသားတံခွန်စိုက် ချန်ပီယံ (၃) ကြိမ်ရရှိခဲ့ပြီး အသက် (၄၅) နှစ်အရွယ်ကျမှ ကာယဗလ မောင်ပြိုင်ပွဲကို တစ်ကျော့ပြန် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှုများ ရယူနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။ 
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပြား၊_ဦး_(သက်ကြီးမောင်)&oldid=410533" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃ ဇူလိုင် ၂၀၁၈၊ ၁၄:၀၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။